Ksenia Sobchak Maksim Vitorgan पति - पहिलो र केवल पति teledivy। Xenia संग विवाह धेरै मैक्सिम मा तेस्रो हो, तर यो प्रेमीहरूको कुनै पनि चिन्ता छैन।
Ksenia Sobchak पति - सोभियत पटक को चिरपरिचित र लोकप्रिय अभिनेता छोरा ईम्यानुएल Vitorgan। मान्छे माथि पाठ्यक्रम, बाल्यकाल प्रदर्शन गर्न गरिएको वृद्धि अभिनेता गरेको वातावरण मा, थिएटर प्रेम र, आमाबाबुको पाइला पछ्याए। मैक्सिम Vitorgan उहाँले मास्को विभिन्न थिएटर मा काम, स्नातक GITIS, म चलचित्रमा कार्य गर्न खोजे। को थिएटर मा खेल लिंक अझै पनि थप मैक्सिम पहिचान छ। Ksenia Sobchak पति चलचित्र मा खेल्छ, तर थिएटर प्रेम गर्नुहुन्छ। आजको सफलता "निर्वाचन दिन", "रेडियो दिन", फिलिम अभिनेता ल्याए "के मानिसहरू लाग्छ।" साथै, मैक्सिम यो भूमिका मा टेलिभिजन र आरामदायक भावना मा छोराछोरीको शो आयोजित।
Scandalously ज्ञात टिभी प्रस्तोता Ksenia Sobchak शो व्यापार को दुनिया मा आफ्नो उज्ज्वल चरित्र लागि प्रसिद्ध भए र साहसी स्तरका व्यवहार देखिन्छ। बाल्यकाल राम्रो समाज को उच्चतम सर्कलमा प्राप्त भएको छ देखि सेन्ट पीटर्सबर्ग अनातोली Sobchak नीति, Xenia को छोरी, प्रसिद्ध मानिसहरू कमै र सार्वजनिक व्यक्तित्व जीवन अवशोषित हुर्किसकेका छ। टेलिभिजन मा क्यारियर, त्यो टिभि "डोम-2" मा नेता को भूमिका संग थाले, र त्यसपछि अन्य परियोजनामा देखा पर्न थाले। Ksenia Sobchak पति जो केटी प्रमुख थियो शो, एक मा उनको भेटे।
Ksenia Sobchak मैक्सिम Vitorgan पति पहिलो जो आफ्नो प्रेमिका संग आएका टिभी परियोजना, आफ्नो भविष्य पत्नी देखे। Xenia जोडीलाई भेट र धारणा सम्म कि आफ्नो सम्बन्ध भविष्यमा विवाह गर्न नेतृत्व गर्नेछन् जसमा कार्यक्रम नेतृत्व। विरोध rallies, त्यतिबेला पार गरेनन् जो Xenia मा काम बैठक मा Interfering, जवान मानिसहरू सधैंभरि सँगै हुन चाहनुहुन्छ भनेर बुझ्न। मैक्सिम एक गोडा मा विधिवत खडा र घन्टी, जो केटी जवाफ प्रस्तुत, को प्रस्ताव Xenia गरे: "। हो" मान्नेहरूले विवाह गर्ने निर्णय गरे भन्ने तथ्यलाई, थाहा छैन कसैले, छैन पनि जवान को घनिष्ठ मित्र। को समारोह पनि किनभने यो tabloids जानकारी रिसाव सजग भएका थिए, साइन इन गर्न जाँदै थिए जो रजिस्ट्री कार्यालय, परिवर्तन गर्नु अघि विवाह, को strictest विश्वास मा आयोजित थियो।
योजना रूपमा विवाह समारोह, मा गोप्य आयोजित थियो। आफ्नो निर्णय मा विवाह पार्टी को उत्सव लागि विवाह गर्न र सबै सहभागीहरू को प्रीमियर गर्न निमन्त्रणा कि लाग्यो जब मास्को मा फिलिम गरेको प्रीमियर समयमा सार्वजनिक गर्न घोषणा जोडी को विवाह छ, र छैन। Ksenia Sobchak, विवाह एक फोटो, को अब पति सार्वजनिक स्तब्ध - मैक्सिम Vitorgan भन्ने समाचार। वैवाहिक गणना द्वारा निष्कर्षमा छ तुरुन्त अफवाहहरु, Xenia यो विवाह एक विवाहित महिला को स्थिति मा आफूलाई ठोकुवा गर्न चाहनुहुन्छ, र आफ्नो पत्नी को मैक्सिम coveted स्थिति। तर दिन, चालु को वर्ष बित्छ र सँगै जोडी छोडनेछैनँ छ। Premieres, प्रदर्शनियों, काम, पेसा - सबै सामान्य रूपमा जान्छ, जोडी Vitorgan-Sobchak, र सबै गफ तल, कुनै पुष्टि फेला मर्छन्।
जतिसुकै Xenia छैन लुगा अन्तर्गत सम्भव छैन उल्लेखनीय पेट विचार गर्न, पत्रकार प्रयास। एक जोडी छोराछोरीलाई छ योजना छ कि छैन भन्ने तथ्यलाई, Sobchak सधैं evasively जवाफ: "यो योजना छैन, तर हामी गर्न चाहनुहुन्छ जब - हामी थाहा छैन।" मैक्सिम Vitorgan आफ्नो पहिलो विवाह बाल छ - एक छोरा र एक छोरी, त्यसैले अर्को बच्चा जन्म दिन भने वर्तमान पत्नी, कुरा छैन। जोडीलाई सामाजिक घटनाहरु, पर्यटन उपस्थित, आफ्नो जीवन settles रूपमा लामो र काम गर्न दिइएको। परिवारको हाल अधिग्रहण - एक घर - मैक्सिम पिता, ईम्यानुएल Vitorgan अनुसार, र एक बच्चाको कोठा पनि समावेश छ। यो वास्तवमा पत्रकार को जिज्ञासा पनि अधिक गरम छ, तर सत्य प्राप्त गर्न अझै कुनै व्यवस्थित छैन। पछिल्लो teledivy बयान उहाँ सम्झनुहुन्छ हामी यसलाई एक आमा बन्न छैन जाँदै छ निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं, तर यी शब्दहरू उनको विवाह अघि, विगतमा थिए। अब यो जीवन परिवर्तन भएको छ विवाह, र एक शक्ति महिला Ksenia Sobchak भयो। पति, छोराछोरी - यी मुख्य मान र महिला आनन्द को अर्थ हो, तिनीहरूले अब आफ्नै अनुभव पूर्व scandalous गोरा देखि विश्वस्त छौं। त्यसैले, असामान्य केही जोडी अचानक बच्चा पहिले नै जन्म गरिएको घोषणा भने हुनेछ। गुप्त विवाह संग अनुभव बारम्बार पक्कै गर्भावस्था लुकाउन गाह्रो हुन, तर यो यस्तो एउटा सञ्चालनको पूरा गर्न सम्भव छ, र दृढ इच्छा संग हुनेछ।
Natasha Stefanenko: जीवनी र रोचक तथ्य
ओल्गा Berezutskaya, फुटबल खेलाडी को पत्नी: जीवनी, परिवार र काम गर्ने
के सोचाइ महिला योगा गर्दै?
प्रभावकारी एनालग "Valtrex"। "Valtrex" वा "Acyclovir" - जो राम्रो छ?
"आयोडिन monochloride": प्रयोगको लागि निर्देशन, विशेष analogs र समीक्षा
"महान् Plaza Resort" मा उत्कृष्ट छुट्टी (Hurghada)